Tag: qirashooyin | Martech Zone
Isbeddellada Suuqgeynta: Sare u kaca Danjiraha iyo Abuure Era
Isniin, Maarso 29, 2021 Isniin, Maarso 29, 2021 Tom Kuhr
2020 aasaas ahaan waxay bedeshay doorka warbaahinta bulshada ay ku leedahay nolosha macaamiisha. Waxay halbawle u noqotay asxaabta, qoyska iyo asxaabta, goob loogu talagalay dhaqdhaqaaqa siyaasadeed iyo xarun loogu talagalay dhacdooyinka isdabajoogga ah iyo qorshaynta munaasabadaha iyo isu-imaatinnada. Isbeddeladaasi waxay gundhig u noqdeen isbeddellada dib u qaabeyn doona adduunka suuqgeynta warbaahinta bulshada sannadka 2021 iyo wixii ka dambeeya, halkaasoo ka faa’iideysiga awoodda danjirayaasha sumaddu ay saameyn ku yeelan doonto xilli cusub oo suuq-geyn dijitaal ah. Akhriso fikradaha ku saabsan
Ku Kordhi iibintaada iyo wax soo saarkaaga 6dan jabsi
Monday, May 25, 2020 Monday, May 25, 2020 Aadam Hempenstall
Anigu waxaan ahay taageere weyn oo isticmaala waqtiga ugu badan waqtigeyga maalin walbana waxaan isku dayaa inaan ka dhigo dhamaan shaqaalaheyga wax soo saar sida ugu macquulsan - gaar ahaan kooxda iibka, oo ah waaxda ugu muhiimsan ee shirkad kasta oo SaaS ah.
Suuq-geynta Isku-xidhka iyo U-hoggaansanaanta CAN-SPAM
Khamiis, Juun 23, 2016 Douglas Karr
Waxaan daawadaa in badan oo asxaabteyda ka tirsan warshadaha oo si deg deg ah u ciyaaraya oo xeerar dabacsan, waxaana ka baqayaa inay maalin uun dhibaato ku dhacdo. Jaahilnimadu cudurdaar ma noqonayso maaddaama kuwan ay yihiin arrimo sharciyeed, ganaaxu mararka qaar wuu ka qaalisan yahay in lagu difaaco sharci ahaan. Laba ka mid ah xadgudubyada ugu waaweyn ee aan arko waa: Inaan ku dhawaaqin inaad xiriir dhaqaale la leedahay shirkadda - haddii aad tahay milkiilaha, maalgashadaha, ama